Ny unboxing voalohany sy ny hevitra momba ny HomePod dia manomboka tonga | Avy amin'ny mac aho
Toa i Apple dia nipaoka ny horonantsarin'ireo YouTubers be mpanaraka indrindra tamin'ny tambajotram-pifandraisana ary tokony ho tamin'ny telo ora lasa izay no nanomboka niseho tao amin'ny YouTube ireo vokatra avy amin'ny taona eo amin'ny tontolo iainana Apple.
Amin'ity lahatsoratra ity dia afaka milaza aminao kely momba ny tena fahatsapana izy rehefa manokatra fonosana ny HomePod vaovao ianao ary izany dia, tsy amidy izao eto amintsika. Avy amin'izay efa vakiantsika, dia efa misy mpandalina maro izay mampitaha izay tsapany maheno ny kalitaon'ny feo an'ny HomePod ary manome azy marika tsara.
Apple dia hanomboka hanolotra ny HomePod amin'ny zoma ho an'ireo mpampiasa ana hetsiny izay nitahiry sy nandoa ny volan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny rafitra famandrihan'ny orinasa. Na izany aza, tokony ho tamin'ny telo ora lasa izay dia efa afaka jerentsika ny mpandahateny Apple miasa amin'ny Youtubers malaza indrindra. Miresaka momba ny vokatra iray izay efa nanome zavatra betsaka horesahina izahay ary izany dia ao anatin'ny famandrihana sy fivarotana voalohany aza nisy resaka tsy fahombiazana, rehefa manome topy maso antsika momba ireo horonantsary izay efa manomboka miseho izao dia ho fahombiazana tanteraka izany.
Avy tao anaty boaty no ahitantsika ny vokatra misy habe misy, matevina ary feno famaranana an'ny an'ny Apple. Ny zavatra manaraka izay mahazatra an'ireo horonantsary telo izay arosonay hitanao dia tsy mampino ny traikefan'ny mpampiasa ary ny iPhone dia manomboka ny fikirakirany raha vantany vao hitany ny HomePod ary afaka segondra vitsy dia manana Siri ianao manome anao ny arahaba sy fanazavana ny fomba fiasa.
Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka manolotra afa-tsy ianao izahay hijery horonantsary mamongotra ny HomePod sy amin'ny fitsapana voalohany, saingy azo antoka fa afaka andro vitsivitsy dia efa manana fanadihadiana lalindalina izahay ary koa fomba fijery mipoaka hizaha ireo singa anatiny rehetra ao anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Ny unboxing voalohany sy ny hevitra momba ny HomePod dia manomboka tonga
Ora vitsy aorian'ny iOS sy tvOS dia tonga ny developer developer beta 2 macOS High Sierra 10.13.4